Ụmụaka Ronaldinho Akụkọ nke Gbasara Eziokwu
Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-agba ọsọ agba agba Ụmụaka Ronaldinho Akụkọ nke Gbasara Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Wizard nke kacha mara aha na aha njirimara; 'Onyinyechi'.
Ronalmụaka anyị Ronaldinho Akụkọ nke Na-enweghị Nkọwa Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Football dribble GOAT gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Enweghị obi abụọ ọ bụla, Ronaldinho bụ ọkachamara ama ama ama nwere bọọlụ bọọlụ. Ọtụtụ ndị na-ele ya anya dị ka onye kachasị egwu n'ọgbọ ya na otu n'ime ihe kacha mma na akụkọ ntolite. Ugbu a, ka anyị bido.
Idrissa Gueye Nwa akwukwo n'akwukwo ihe omuma
Akụkọ Ronaldinho nke Childhoodmụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Nke mbu, amughi Ronaldinho dika Ronaldinho ma obu Ronaldinho Gaúcho. Mgbe a mụrụ ya, ọ kpọrọ aha ahụ Ronaldo de Assis Moreira.
A mụrụ ya na 21st nke Machị, 1980, na Porto Alegre, Brazil. Nna ya, João Moreira, bụ onye na-agba ígwè / welder n'ọdụ ụgbọ mmiri. Ọ bụkwa onye bụbu ndị ọgba bọọlụ.
Mama Ronaldinho, Miguelina de Assis, bụ nwanyị na-ere ihe ntecha nke mechara bụrụ nọọsụ oge niile. Ọ na-enwe obi ụtọ ịbịa site na ezinụlọ ndị egwuregwu bọọlụ dịka nna ya na nwanne ya nwoke nke okenye bụbu ndị ịgba bọọlụ.
Nkuzi Rivaldo Child Plus Story
Agbata obi ya na Porto Alegre bụ onye ama ama maka ịbụ otu n'ime obodo ndị kasị daa ogbenye na ndị kasị sie ike na Brazil. Ọ bụ ebe obibi Raphinha, Leeds United Footballer onye na-egwu n'okpuru Marcelo Bielsa.
Ezinụlọ Ronaldinho na-agbakarị ego na ịchekwa ụlọ. Iringla ezumike nká site n'egwuregwu football na ilekwasị anya n'ahịa ịgbado ọkụ anaghị emecha mezuo nna ya.
Ezinụlọ ahụ ga-etinye olileanya niile maka Roberto (nwanne nwoke okenye nke Ronaldinho) ịbanye na klọb ọkachamara ma nweta ezigbo ego maka onwe ya na maka mbuli ezinụlọ.
Andrea Pirlo Child Story Story na-emeghị ihe ọ bụla
Ndụ Ronaldinho Ezinụlọ:
Ọ dị nwute, nna Ronaldinho abịaghị n'oge. Ọ na-arụ ọrụ maka Gremio, otu n'ime nnukwu klọb abụọ dị na Porto Alegre dị ka onye na-eme egwuregwu ụbọchị ruo mgbe ọ hapụrụ ọrụ ahụ iji dozie ya dị ka welder n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Ronaldinho anaghị eme ihere ịnakwere na ọ bụ nwata nwa. A maara nne ya aha ya Dona Miguelina Elói Assis dos Santos, mana ọ na-ahọrọ ka a kpọọ ya Miguelina.
Leonardo Bonucci nwa akụkọ Akụkọ nke na-enweghị ihe ọ bụla
Ọ na-akwado ezinụlọ ya mgbe ọ na-azụ ahịa ịchọ mma tupu ya eburu nrọ ya ogologo oge ịghọ onye nọọsụ dị elu n'ihi na ọ dị ka nke dị n'okpuru.
Ronaldinho na mama m, Miguelina.
Deisy bụ otu nwanna nwanyị naanị ya hụrụ n'anya nke Ronaldinho nke rapaara ya n'ahụ maka ndụ. Ogo nkwado Deisy kwere nkwa inye nwanne ya nwoke enweghị oke na enweghị atụ. Ọ na-elekọta ma na-ahazi ihe omume niile maka nwanne ya nwoke.
Nwanne nwanyị Ronaldinho, Deisy.
Ronaldinho Biography Eziokwu - Nnukwu Nwanna Mmetụta:
Ronaldinho nwanne Roberto de Assis Moreira bụ 10 afọ ya. Ọ bụ ezie na a maara ya nke ọma na ọgụgụ isi ya na njikwa ọrụ nwanne ya nwoke nke tọrọ (Ronaldinho).
Thiago Alcantara Child Story Plus Ejighị Ezi Ihe Akụkọ
Ya onwe ya bu onye na-eto eto n'egwuregwu football n'oge o bu nwata. N'ezie, ụlọ ọgbakọ Brazil Grêmio nyere ezinụlọ Assis ụlọ obibi iji mee ka nwatakịrị ahụ kwere nkwa na klọb.
N'oge gara aga, ndị ezinụlọ biri n'ụlọ osisi dị n'etiti a favela ma ọ bụ ná mkpịrị ụlọ na Porto Alegre, n’ebe ndịda Brazil.
N'oge a, João (nna ya), onye na-ere ahịa site na ahia, na-arụkarị ọrụ dị ka onye nche ọdụ ụgbọ ala n'ámá egwuregwu Grêmio iji gbakwunye obere ego ya.
Ihe ịga nke ọma nke Roberto dị ka ndị ịgba ọsọ ụkwụ nyeere ezinụlọ ya aka ịhapụ oghere ndị ahụ maka ụlọ ka mma, mana olileanya ya maka ịgba bọọlụ kachasị elu na Grêmio gwụchara mgbe ọ merụrụ nnukwu ikpere.
Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, nwanne nwoke nke Roberto bụ Ronaldo (nke a maara ugbu a dị ka Ronaldinho), ga-apụta dị ka ọbụna ikike na-ekpo ọkụ n'oge ntorobịa Grêmio.
Ọ ghọrọ nke ahụ tupu ọ pụọ na obodo ya gaa PSG nke French na n'ikpeazụ Barcelona club Barcelona, ​​onye ya na ya nọrọ afọ ise, tupu ọ pụọ Milan na 2008.
N'ime ọrụ Ronaldinho niile, Assis mere dịka onye nnọchi anya nwanne ya na onye ndụmọdụ ya wee nye ya otuto, gụnyere Ronaldinho n'onwe ya, dị ka ikike na ndu nke onye ọkpụkpọ.
N'oge okwu nnabata ya mgbe ọ natara FIFA World Player of the Year award maka afọ nke abụọ na December 2005, Ronaldinho na-asọpụrụ nwanne ya nwoke.
Dị ka ya si kwuo “Roberto bụ arụsị m. Ọ nọwo na ọtụtụ na enyerela m aka ọ bụla nke ụzọ. Ọ gbaa m ume ịghara ịkwụsị ịgbalị. ”
Ronaldinho Biography - Olee otú Roberto si kpụzie ọrụ ya:
Ronaldinho sitere n'ike mmụọ nsọ nwanne ya nwoke nke okenye wee malite ịmalite ịgba egwu football n'oge 7 dị afọ.
Luuk de Jong nwata Akụkọ Plus na-enweghị isi akụkọ eziokwu
Ya na nwanne ya nwoke nọrọ ihe ka ukwuu n'ime afọ ya na-eme otu ọzụzụ n'otu ọzụzụ na mpaghara ya dara ogbenye ma sie ike.
Roberto hụrụ ọdịnihu nwanne ya nwoke nke nta ma mee ya site na ịmepụta ọzụzụ ọzụzụ kwa ụbọchị maka ya.
Ọ malitere site na ịkpọ obere Ronaldinho n'ọhịa mgbe ọzụzụ ya gasịrị.
N'oge ole na ole, ọ ga-atụfu ọzụzụ nke aka ya naanị iji wepụta oge iji zụọ nwanne ya nwoke.
Pierre-Emerick Aubameyang Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu na-enweghị isi
Dị ka Ronaldinho si kwuo, “Roberto manyere m ịrụ ihe ruru narị ise juggles kwa oge. O guzoro na-ele m ka m na-eme ya, ọ gaghị agakwa ruo mgbe m mechara ya.
Nke a wepụrụ m ọchị niile na, n'oge ahụ, iwe were m nke ukwuu. Ebere m akwa. Aghọtaghị m. Ma emechara m ghọta ihe ọ chọrọ ”
Ọ bụ Roberto ka mepụtara nkà ndị a ma nyefee ya nwanne ya nwoke.
Ndị a bụ ndị a; (1) Omume nke ịgba bọọlụ na njikwa na ala na ikuku. (2) Knowingmara etu esi ehulata ikpere ya mgbe ọ na-atụgharị
(3) Learningmụta ịghara ilegide bọl anya (4) Learningmụta otu esi eme ihe na-agagharị ma ọ dịkarịa ala 1 mita site na onye mmegide na (5) Learningmụta otu esi eme ngwa ngwa mgbe ọ bụla agagharị.
Mgbe ọ dị afọ 7, Ronaldinho nwere ike dribble bọọlụ ahụ siri ike, bulie bọọlụ elu ka ọ dị mma ma mee njikwa bọl na-eju anya ma jiri echiche ya.
Ọzụzụ n'èzí mpaghara nkasi obi ya mere ka Ronaldinho nwee ikike ọ na-echeghị na ya nwere. Ọ bụ n'oge a ka e wuru ntọala nke nkà ndị a. Ngwá ndị a gụnyere;
(1) The FlipFlap / Elastico (2) Anya Na-adịghị Anya na dribbling (3) Na-eme Patent Freekicks (4) Na-eme Hocus Pocus kachasị amasị ya (Dị ka a hụrụ na foto dị n'aka ekpe) na n'ikpeazụ (5) Ime Joga siri ike Bonito dribble.
A ga-egosipụta nkà ndị a n'akụkụ ikpeazụ nke isiokwu a. Okwesiri ikwuputa na Ronaldinho weghaara ikike ndia na futsal ma obughi bọọlụ. Ọ bụ ntụgharị ya site na futsal gaa bọl nke mere ka ọ gbanwee ndụ ya dị ka ndị ịgba egwu.
Ronaldinho Janaína Mendes Akụkọ ịhụnanya:
Ronaldinho zutere Janaína Mendes mgbe 2002 World Cup na ha abụọ hụrụ n'anya. Ha kpebiri ka ha kee eriri mgbe ha na-akpakọrịta ruo afọ abụọ.
Na 25th nke February 2005, Ronaldinho na onye ịgba egwu Brazil bụ Janaína Mendes nwere nwa nwoke aha ya bụ João nke ọ gụrụ aha nna ya nwụrụ anwụ.
Ronaldinho bu nwoke juputara na ndu na ndu. Nwunye ya maara ya dị ka ezigbo di na-enweghị oge ọ bụla. Ọ na-enwekarị obi ụtọ oge ya na ya nọrọ.
Otu Nna Ronaldinho Si Nwụrụ:
Akụkọ akụkọ bọọlụ na-asọpụrụ nna ya mgbe niile n'agbanyeghị ọnwụ ya. Nna ya bụ otu n'ime ndị kachasị mkpa maka ya na ọrụ ya, n'agbanyeghị na ọ nwụrụ mgbe ọ dị obere.
Ọnwụ nna ya bụ ihe nwute nke mere na Jenụwarị nke 1989. Ọ bụ ọnwa gbara ọchịchịrị onye Ronaldinho tụfuru onye nkuzi mbụ ya. Ajụjụ dị ebe a bụ ihe mere n'ezie? Kedu ihe kpatara ọnwụ nna ya?… Nke a bụ ya;
Nwanne nwoke Ronaldinho nke okenye mere ego site na mgbatị ya na ụlọ ọrụ Grêmio football.
Quique Setien Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Na-adịghị Eke Ndụ
Ọ zụtara ụlọ obibi ma mee ka ezinụlọ ya hapụ ụlọ ochie ha gaa n'ụlọ ahụ mara mma nke nwere ọdọ mmiri.
N'ụbọchị ahụ kwesịrị ntụkwasị obi mgbe Roberto lọtara site na ọzụzụ maka nnọkọ ezinụlọ iji mee ememme ncheta ọmụmụ nke iri na asatọ ya na ncheta nne na nna ya, ọ hụrụ ujo nke ndụ ya.
Ọ hụrụ na nna ya tara ahụhụ na-egbu egbu mgbe ọ na-egwu mmiri. Ronaldinho dị nanị afọ asatọ n'oge ahụ.
Dị ka Ronaldinho si kwuo, “Papa m nyere m ndụmọdụ kacha mma m metụrụla. N'elu ala, ọ gwara m ka m mee ihe ziri ezi ma bụrụ onye na-akwụwa aka ọtọ, na-akwụ ụgwọ.
Na n'ọhịa: ọ gwara m mgbe niile ka m gbaa bọọlụ dị ka o kwere mee. Ọ na-ekwukarị na otu n'ime ihe ndị kasị dị mgbagwoju anya ị nwere ike ime bụ igwu ya dị mfe.
Nwanna Ronaldinho - Nsogbu Ọgwụgwụ nke Ọrụ Ya:
Ronaldinho na-ekwukarị nwanne ya nwoke nke okenye (Roberto) maka ịbanye na ya ịbụ nna nna ya mgbe ha nwụsịrị.
Mgbe nna ha nwụsịrị, ọ bụ Roberto na-eburu ibu ọrụ ezinụlọ.
Ọ lekọtara Ronaldinho na ụmụnne ya nwoke ndị nwoke na ego ndị ọzọ o nwetara site na bọọlụ.
N'ụzọ dị mwute, ọrụ ya na-ekwe nkwa tinye na njedebe na njedebe n'ihi nnukwu mmerụ ahụ ọ kwadoro mgbe ọ na-egwu maka ụlọ ọrụ Garmio.
Ronaldinho Biography - Ndụ mgbe Nna Mụsịrị:
Ronaldinho tụrụ egwu na ezinụlọ ya ga-abụ ogbenye ọzọ mgbe njedebe nke ọrụ nwanne ya nwoke. Inwe mmerụ ahụ pụtara na Roberto enweghịzi ike igwu egwu ma nweta ego zuru ezu iji kwado ndụ ha.
Nke a bụ oku doro anya maka Ronaldinho. Oge ọ ga - ebili wee bie ụgwọ ịgba ụgwọ ya. N'oge a, o kpebisiri ike ime ya ngwa ngwa.
Ọ ghaghị itinye mgbalị zuru ezu na football. Ọ ghaghị inweta nlebara anya mba ahụ na nke ụwa niile ọ chere na ọ bụ akụkụ nke ọdịnihu ya.
Ronaldinho malitere site na ịbụ onye na-ekere òkè mgbe niile nke futsal (nkwụsị nke bọl na-egwuri n'ụlọ n'ime ụlọ ikpe dị ike ma nwee nanị egwuregwu ise n'akụkụ ọ bụla) na egwuregwu bọl.
O were obere oge tupu ọ malite inweta nlebara anya. Fans oge gboo mara ya dị ka nwatakịrị kacha nta na nwata kachasị mma nke nwere ike ịme ụdị egwuregwu samba nke Brazil na egwuregwu bọọlụ na n'èzí.
Ọ bụ n'oge a aha ya 'Ronaldinho' (nke pụtara Obere Ronaldo) Ndị enyi ya na ndị fan kwadoro ya nke ọma.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na Ronaldinho bụ mgbe niile, onye kachasị nta n'ọhịa n'oge ọ nọ na agụmakwụkwọ.
Dị ka ya si kwuo, Ha kpọrọ m ya n'ihi na m dị obere. M na-egwu egwuregwu dị ka ụfọdụ Ronaldo Luis Nazario de Lima onye tọrọ m.
Dika ndi mmadu huru na odi ozo Ronaldo onye buru ibu, ka mma na okenye, ha kpebiri ịkpọ m Ronaldinho. Anabatara m ya n'ihi na m na-akwanyere ya ùgwù ma abụ m nwata. ”
Rịba ama: Ronaldinho nwetara nsụgharị Portuguese "inho" gburugburu aha ya "Ronald" n'ihi nha ya. N’asụsụ Portuguese, “inho” pụtara obere ma ọ bụ obere.
Ọtụtụ oge, ìgwè ndị ntorobịa Ronaldinho na-eme egwuregwu na-enweghị egwuregwu. "Nanị ahịhịa dị n'ọhịa dị n'akụkụ," Ronaldinho na-echeta. “Ọ dịghị ahihia dị n’etiti! Ọ bụ naanị ájá. ”
Ahụmahụ ya mbụ na futsal nyeere aka ịkpụzi ụdị egwu egwu ya pụrụ iche, nke e mere ka ọ dị mma site na imeziwanye akara aka ya na njikwa ụgbọ ya nke ọ mụtara n'aka nwanne ya nwoke bụ okenye Roberto.
Ronaldinho kwuru n'otu oge, sị, Ọtụtụ ihe m na-eme sitere na futsal ma kụziere m Roberto. N'oge m na-egwu egwuregwu, bọl m na-achịkwa yiri nke onye ọkpụkpọ futsal na-achịkwa. ”
Ronaldinho weghaara oge ya n'ịmụ ndị isi dị ka Pelé, Ziko na Rivellino ma nọgide na-arọ nrọ ịgbaso nzọụkwụ ha.
Oge ahụ mechara bịa Ronaldinho. Enyere ya onyinye dị ka onye ọkpụkpọ bọọlụ ntorobịa kacha nwee ọ Brazilụ na Brazil mgbe ọ meriri otu ihe mgbaru ọsọ 23 ọchị na otu egwuregwu mgbe ọ dị afọ 13.
Ihe mgbaru ọsọ ya dị egwu na-eduga ndị otu ya n'ọsọ egwuregwu kachasị. Ọzọkwa, oge mgbanwe a bịara na 1997 mgbe otu nwata nwoke Ronaldinho dị afọ iri na ụma meriri oku na ndị otu 17 nke Brazil.
N'afọ ahụ, o duuru ndị agha gaa FIFA n'okpuru 17 World Championship na Egypt. A họpụtakwara ya dị ka onye kachasị egwu egwuregwu.
N'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, Ronaldinho bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya maka Grêmio, otu n'ime ìgwè ndị a na-eme ememe kachasị na Brazil.
N'afọ sochirinụ ka enyere ya ohere ịmalite izizi mbụ ya na Copa Libertadores. N'oge na-adịghị anya ọ ghọrọ onye otu n'ime ndị otu ahụ ma bụrụ onye na-egbu kpakpando ha ruo mgbe e zigara ya Paris Saint-Germain na Eprel 2001 maka for 5 nde.
Ronaldinho nwekwara ọtụtụ ndị isi na-eduga egwuregwu, gụnyere Arsenal FC, otu ndị London. Ọ gbasoro aro nwanne ya nwoke ka ọ banye maka PSG.
Ronaldinho Biography - 2002 World Cup:
Mgbe ọ na-egwu egwu na PSG, Ronaldinho gara n'ihu na ndị otu mba Brazil na-egwu egwuregwu mba ofesi. Omume ya mere ka ọ họrọ na 2002 ụwa cup.
N'oge 2002 World Cup, ọ bụ akụkụ nke otu egwu atọ a maara dị ka "atọ Rs" -Ronaldinho, Ronaldo, na Rivaldo-onye nyeere Brazil aka inweta aha ahụ n'afọ ahụ, na mgbatị ya nke 30 nke dabara na ụgbụ ahụ n'oge quarterfinal megide England bụ otu n'ime ihe omume ahụ pụtara ìhè.
Brazil meriri Germany maka isi ihe mgbaru ọsọ ndị ahụ bụ otu n'ime nnukwu R, Ronaldo Luis Nazario de Lima.
Ronaldinho Biography Eziokwu - Nyefee na Barcelona:
Na 2003, Ronaldinho kwupụtara na ọ dị njikere ịhapụ Paris Saint-Germain, na agha ọkụ ọkụ maka ọrụ ọrụ ya malitere.
Ndi otu abuo kacha mma na Europe choro ya, FC Barcelona na Manchester United. Ọzọkwa, ọ nara ndụmọdụ nwanne ya nwoke wee banye na Barcelona na July 19, 2003.
Ntinye aka ya maka ụlọ ọrụ ahụ mezuru nrọ nke ndụ nke ịbanye na klọb ndị kachasị ewu ewu n'ụwa, karia, na-emeri ụdị akụkọ ahụ bụ Nke 10 nke ndị egwuregwu kachasị egwu egwuregwu na-eyi.
Ọbịbịa ya n’obodo-agba bọọlụ bụ nnukwu ihe omume, ndị nwere puku 25,000 tụgharịrị iji nabata ya.
Na oge 2005-06, ọ rụrụ ọrụ dị mkpa n'inyere Barcelona aka inweta mmeri mbụ ha Njikọ Njikọ na afọ 14.
Ronaldinho Partying Akụkọ:
Ronaldinho esonyela na-ebute ụzọ n'ọtụtụ nnọkọ. Nke a gosipụtara na ọ bụ otu n'ime anụmanụ kachasị ukwuu n'ụwa.
Nke a bụ ndụ ya n'èzí egwuregwu.
Ọ hụrụ ịga oriri na ọ Brazilianụ Brazilianụ kachasị ukwuu na Brazil na gburugburu ụwa. Nke a bụ ihe kpatara o ji kwado aha ya dị ka anụmanụ kachasị ukwuu na ihu ụwa.
Echiche dị iche iche, nke ezi uche dị na ya maka ọrụ ịgba bọlbụ ga-abụ na mgbe ọ gọnahụrụ onwe ya ụfọdụ ihe ụtọ ruo mgbe ọ gafere 30s, Ronaldinho nwere ike iji ụbọchị ndụ ya niile na -ekere afọ ojuju obi ya.
Otú ọ dị, nke a adịghị ka ọ bụ nhọrọ. Dị ka ya si kwuo, Ndụ dị mkpụmkpụ ma nwee ike ịkwụsị na-atụghị anya ya — ya mere nwee obi ụtọ n'oge ị nwere ike. ”
Dinzọ Mberede Ronaldinho:
Ronaldinho nwere ihe ọghọm mgbe ọ na-aga ime emume ncheta ọmụmụ nne ya na Porto Alegre.
Nke a mere na Satọdee mgbe ụgbọ ala ya, nke onye ọkwọ ụgbọ ala nke aka ya, na-abanye n'ime olulu.
FIFA ndị na-eme egwuregwu afọ abụọ na-agba ọsọ n'enweghị nsogbu site na mberede ụgbọ ala na Brazil.
“Ọ dịghị ihe dị njọ,” Nwanne nwoke Ronaldinho na onye nnọchi anya Roberto de Assis gwara ndị nta akụkọ. “Ọ dịghị onye ọ bụla merụrụ ahụ. Nke ahụ bụ ihe kacha mkpa. ”
Ronaldinho arsgbọ ala:
A na-akpọ Ronaldinho FC FC akụkọ mgbe niile dị ka otu n'ime ndị na-egwu egwuregwu nke football, ma ikekwe onye Brazil na-enwekarị oge ka ọ pụọ n'ọhịa, karịa na ya. N'elu ubi ahụ, a maara ya dị ka nwoke nwere anya maka ụgbọ ala mara mma.
Onye anwansi n’egwuregwu bọọlụ bụ onye amaara onwe ya n’ụkwụ ụgbọ ala ma hụ ya ka ọ na-eji ọtụtụ ụgbọ ala.
Ma ọ bụ n’ụlọ ịgba egwu abalị ma ọ bụ n’ọhịa, Ronaldinho na-eme ka igwe mmadụ ahụ na-atụrụ ndụ.
Nwanna Ronaldinho, Mkpọrọ:
Nwanna nwoke na onye nnọchi anya Brazil bụ Ronaldinho, Roberto de Assis Moreira, a mara ya ikpe ịga mkpọrọ afọ ise na ọnwa ise maka ebubo ịchụ ego na ụtụ isi.
Dabere na ebubo ndị a, Roberto zobere mbufe nke US $ 884,000 site na Central Bank nke Brazil, ebe ọ na-ekpugharị ngagharị nke ihe onwunwe ruru R $ 776,000 ma tinye US $ 125,000 na akaụntụ Switzerland na-enweghị ịgwa ndị ọchịchị.
Ihe ndị a mere n'etiti 2003 na 2004. Roberto ejeela mkpọrọ ya ma bụrụzie onye nweere onwe ya.
Na mgbakwunye na ebubo ebubo ego, ọ tara ahụhụ onwe ya n'oge ndị a mgbe emechiri ụlọ ịgba bọọlụ ya na Porto Alegre, yana ụlọ ịgba egwu abalị ya n'obodo ahụ mgbe igbu ọchụ.
Dinhụnanya Ronaldinho maka Pepsi:
Ronaldinho enweela nkwado na ọtụtụ ụlọ ọrụ, gụnyere Nike, Pepsi, Coca-Cola, EA Sports, Gatorade na Danone wdg
Na 2006 o nwetara ihe karịrị $ 19 nde site na endorsements. N'ịbụ onye kwadoro Pepsi maka ọtụtụ ọrụ ya wee pụta na azụmahịa na David Beckham, Thierry Henry na Lionel Messi.
Ronaldinho bịanyere aka na Coca-Cola na 2011, agbanyeghị, nke a kwụsịrị na July 2012 mgbe e jidere ya na-a Pepụ Pepsi na ogbako akụkọ.
Ronaldinho Biography Eziokwu - Okwu na Pep:
One of Pep Guardiola si ihe mbu dika onye isi ochichi Barcelona ka ha tufuo Ronaldinho. Ajụjụ dịịrị onye ọ bụla n’egbughị oge bụ… Gịnị mere o ji mee nke ahụ? Mara nke ọma Ronaldinho dị oke mkpa na klọb ahụ ka mmadụ bidoro oge ịga nke ọma na Barcelona.
A hụrụ Ronaldinho dị ka onye nyeere uto nke Lionel Messi.
Ugbu a, nke a bụ eziokwu: O kwuru na Ronaldinho nwere ibi ndụ na-adịghị mma n'èzí egwuregwu. O kwuru na ụzọ ndụ ọjọọ ya na-eme ya mmetụta dị egwu.
Otú ọ dị, Guardiola mkpebi ahụ bụ ihe esemokwu n'oge ahụ. Nke a bụ ihe mere ọtụtụ ndị football football ji enweghị mmasị na ya ruo oge.
Ronaldinho Biography - Nkà ise nke gosipụtara na ọ bụ ya kasị ukwuu Football dibịa afa:
(1) Mgbe ọ wụsara ebe a na-esote a freekick megide England na 2002 World iko, Ronaldinho mepụtara ụzọ maka ntoputa nke Magic na football.
(2)FlipFlap Elastico Style: Mgbe izizi njem a, NASA chịkọtara ndị sayensị kachasị ukwuu n'ụwa maka nzukọ mberede.
Na nzuko ahụ, ekwuru na ọ dị nwoke nwere ike ịgbada iwu gbasara physics. Aha ya bụ Ronaldinho Gaúcho. Ọtụtụ anwawo nke a ma daa. A na-ahụ ihe atụ n'okpuru;
(3) Enweghi Anya-Anya: Tried nwetụla mgbe ị na-egwu bọl na anya gị? Ochie ochie "lekwasị anya na bọọlụ" bụ n'ụzọ doro anya na ọ bụghị na akwụkwọ ọkọwa okwu nke Ronaldinho.
(4) Ebu Pocus: Nke a bụ otu n'ime nkà kachasị mma nke Ronaldinho, na-achọ ka ọtụtụ oge na-arụ ọrụ na ala ọzụzụ maka otu oge nke ọgụgụ isi n'ọhịa.
(5) Gadị Joga Bonito: Atụla ụjọ ma ghara ịgbanwe ihuenyo gị. Nke a bụ Joga Bonito Style chepụtara Ronaldinho.
Ronaldinho Biography - Ndụ LifeBogger:
Anyị na-ewetara ọkwa nke onye a na-akpọkarị maestro nke bọọlụ maara nke ọma.
Enwere ike ịhapụ ihe ị kwuru ma gụọ isiokwu ndị metụtara ya.
Ndị egwuregwu bọọlụ Serbia
Ndị na-egwu bọọlụ Zambia
Ụmụaka Robinho Story Plus na-emeghị ihe ọ bụla
Nwere ike 14, 2021